CCTV wuxuu kormeeraa PM220WE
Shahaadadan mihnadlaha ah ee shaashadda weyn ee LED 21.5 ”kormeeraha midabku wuxuu bixiyaa wax soo saarka HDMI iyo VGA. IPS guddi, ku faanaya 16.7 milyan midab & FHD Go'aanka kormeerahani wuxuu ka dhigayaa fiidiyowga inuu soo noolaado.
Muuqaalka 'FHD' waxaa si qurux badan u taageeray heerka cusbooneysiinta 180hz si dhakhso leh si loo hubiyo xitaa isku xigxigyada dhaqaaqa u muuqda mid jilicsan oo faahfaahsan, oo ku siinaya geesinimadaas marka lagu ciyaarayo. Iyo, haddii aad haysato kaar muuqaallo isku mid ah oo AMD ah, markaa waad ka faa'iideysan kartaa tignoolajiyadda lagu dhex dhisay ee FreeSync si looga takhaluso jeexjeexa shaashada iyo turunturooyinka marka la ciyaarayo. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad lasocoto maratoon kasta oo habeenka dambe ah, maaddaama kormeeraha uu leeyahay qaab shaashadeed oo yareynaya soo-gaadhista qiiqa iftiinka buluugga ah kana caawinaya ka hortagga daalka indhaha.
Shahaadadan mihnadlaha ah ee shaashadda ballaaran ee 27 "kormeeraha midabku wuxuu bixiyaa soo-galinta HDMI, VGA, BNC & 4in1. Iyada oo dheellitir dheeraad ah oo BNC ah & wax soo saar 4in1 ah, kala duwanaanteeda ayaa u oggolaan doonta inay u shaqeyso dalab kasta. Ku faanista 16.7 milyan midab & FHD Xallinta kormeerahan ayaa ka dhigi doona fiidiyowgaaga inuu soo noolaado.
CCTV wuxuu kormeeraa PX240WE
Shahaadadan mihnadlaha ah ee shaashadda ballaaran ee 23,8 ”kormeeraha midabku wuxuu bixiyaa HDMI, VGA, BNC & 4in1 gashiga. Iyada oo dheellitir dheeraad ah oo BNC ah & wax soo saar 4in1 ah, kala duwanaanteeda ayaa u oggolaan doonta inay u shaqeyso dalab kasta. Ku faanista 16.7 milyan midab & FHD Xallinta kormeerahan ayaa ka dhigi doona fiidiyowgaaga inuu soo noolaado.
CCTV wuxuu kormeeraa PX220WE
Shahaadadan mihnadlaha ah ee shaashadda weyn ee LED 21.5 ”kormeeraha midabku wuxuu bixiyaa wax soo saarka HDMI, VGA, BNC & 4in1. Iyada oo dheellitir dheeraad ah oo BNC ah & wax soo saar 4in1 ah, kala duwanaanteeda ayaa u oggolaan doonta inay u shaqeyso dalab kasta. Ku faanista 16.7 milyan midab & FHD Xallinta kormeerahan ayaa ka dhigi doona fiidiyowgaaga inuu soo noolaado.
Shahaadadan mihnadlaha ah ee shaashadda ballaadhan leh ee loo yaqaan 'LED 55' 'midabka kumbuyuutarka ee' 4K 'wuxuu bixiyaa DisplayPort, HDMI, VGA, Looping BNC, Audio In. Kormeerahan wuxuu bixiyaa xallinta aadka u sarreeya iyo saxsanaanta midabka, oo ku jirta cabbir ku habboon in lagu isticmaalo goob kasta. Birta birtu waa dhammaystir xirfadeed oo bixisa adkeysi iyo isku halleyn nolosha unugga.
Shahaadadan mihnadlaha ah ee shaashadda ballaaran ee 23,8 ”kormeeraha midabku wuxuu bixiyaa wax-soo-saarka HDMI, VGA, & BNC. Iyada oo ay soo saareyso BNC dheeri ah wax soo saarkeeda waxay u oggolaan doontaa inay u shaqeyso codsi kasta. Ku faanista 16.7 milyan oo midabo & FHD Xallinta kormeerahani wuxuu ka dhigayaa fiidiyowga inuu soo noolaado.
CCTV wuxuu kormeeraa PA270WE
Darajadan xirfadeed ee shaashadda leh ee shaashadda LED 27 "waxay bixisaa HDMI, VGA, & BNC gashiga. Iyada oo ay soo saareyso BNC dheeri ah wax soo saarkeeda waxay u oggolaan doontaa inay u shaqeyso codsi kasta. Ku faanista 16.7 milyan oo midabo & FHD Xallinta kormeerahani wuxuu ka dhigayaa fiidiyowga inuu soo noolaado.
Darajadan xirfadeed ee shaashadda leh ee loo yaqaan 'LED 23.8' "kormeeraha midabku wuxuu bixiyaa waxqabadyada HDMI iyo VGA. IPS guddi, ku faanaya 16.7 milyan midab & FHD Go'aanka kormeerahani wuxuu ka dhigayaa fiidiyowga inuu soo noolaado.